Company mere eme - Ningbo D & R Metal Indutries Co., Ltd
Ujo Absorber Metal Parts
Company akụkọ ihe mere eme
ngwaahịa ozi ọma
Ningbo D & R Metal Industries Co., Ltd bụ ọkachamara nkwusioru ujo absorber pistin nkpa-n'aka na ujo absorber akụkụ (damper, eyelet, roba akụkụ) emeputa. Anyị kacha mma asọmpi na gafere atụ anya iji merie n'elu ọhụrụ ahịa otu otu, na-emeri n'elu ẹdude ahịa oge na ọzọ. N'eziokwu, onye ọ bụla ahịa anyị weere na ihe karịrị afọ ka na-arụsi ọrụ ike ahịa. Olee otú anyị na-eme ndị rụzuru mgbe, bụ na nkọwa nke ọrụ anyị-eruba, ma ihe mere a anọgide oké ọrụ na-eruba na-esite na anyị ụlọ ọrụ omenala, management nkà ihe ọmụma, na n'ihe banyere ọrụ.
Mbụ na ma eleghị anya, mbụ mgbe ndị ọzọ na-ekwu ya, n'ihi na D & R ọ bụ eziokwu: anyị nwere a ahuhu maka idozi nsogbu. Anyị na-adịghị agbalị idozi nsogbu nile, kama naanị onwe anyị a otu ebe nke nka nke bụ ịrụ ọrụ nke ọma, kpọmkwem, a pụrụ ịdabere na-eji ire ụtọ na ime ihe nke ujo absorber akụkụ mmepụta e. Na anyị na-anapụta ndị ngwọta emejuputara na ahaziri gị mkpa, dị ka gị kpọmkwem lekwasịrị ahịa. Ka aka-na anya na ogologo ụlọ ọrụ ahụmahụ, na n'adịghị ka mpi na-eche na nke ha onwe ha uru mbu (ma ọ bụ nanị!), Anyị na-ebe a na D & R kwekọọ n'otú anyị aguba-egbusi-elekwasị anya ahụ n'ezie ngwọta dị gị mkpa ma na-na, dị ka anyị na-anya ụgbọ ike . N'ụzọ dị otú a, uru abịa anyị n'ezie na iji nwayọọ nwayọọ na - na mkpọchi-nzọụkwụ gị.
Ebe a na D & R, "aga n'ihu mma" abụghị nnọọ a catchphrase, ma ihe anyị na-eburu n'uche. Na a pụrụ iche anya, pụrụ iche echiche, na jiri ahịa na end-ọrụ nzaghachi anyị na mgbe niile na-mma na igafe onwe anyị ime ihe karịrị gị anya. Anyị na-na na na-echegbu onwe na-etinye ihe anyị mere na-arụ ọrụ gị.